Podcast 2x04: OS X El Capitan waa halkan, sida iOS 9.0.2 iyo 9.1 Beta 3 | Wararka IPhone
Apple ayaa maanta soo saartay nooca cusub ee OS X, "El Capitan", iyada oo lagu hagaajinayo waxqabadka iyo astaamaha cusub ee hawlgalkeeda sida Split View ama Smart Search cusub, oo la mid ah sida ay ugu shaqayso iOS 9. Waxa kale oo ay soo saartay noocyada cusub ee macruufka, 9.0.2 ee guud ahaan dadweynaha, iyo iOS. 9.1 Beta 3 loogu talagalay Soo-saareyaasha iyo Beta Dadweynaha. Dhamaan wararkaas iyo waliba diiwaanka iibka cusub ee iPhone 6s iyo 6s Plus iyo arimo kale oo soo ifbaxaya ayaa diirada saaraya barnaamijkeena maanta.
Dhegeyso »2 × 04: OS X El Capitan, rikoodhka iibka iPhone iyo inbadan» oo ku saabsan Spreaker.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Wararka IPhone » podcast » Podcast 2 × 04: OS X El Capitan waa halkan, sida iOS 9.0.2 iyo 9.1 Beta 3
Falanqeeyayaashu waxay filayaan iPhone "jaban" oo loogu talagalay 2016
Apple ayaa joojisay saxiixa macruufka 8.4.1, macsalaameyn Jailbreak